Rabekijana Félix : “Aleo hofidin’ny vahoaka ny lehiben’ny faritra” | NewsMada
Mby aiza ny fanatanterahana ny fifidianam-paritra? Tsy ho tratra amin’ny volana jona… Iza no tokony hifidy ny lehiben’ny faritra? Maneho ny fijeriny ny filoha nasionaly vonjimaika eo anivon’ny KMF/Cnoe, Rabekijana Félix: “Aleo hofidin’ny vahoaka ny lehiben’ny faritra. Satria masi-mandidy ny vahoaka, tompon’ny teny farany eo amin’ny fampandrosoana ny faritra misy azy.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Azo heverina ihany ve ny fanatanterahana ny fifidianam-paritra amin’ny volana jona?
Rabekijana Félix (-): Ny voalazan’ny lalàm-pifidianana: 90 andro mialoha ny fifidianana ny fanaikana mpifidy, raha hanao fifidianana eto Madagasikara. Raha dinihina amin’izao, tapitra iny ny volana marsa: nokasaina hatao any amin’ny jona ny fifidianam-paritra, raha hatao… Nefa tsy misy fiantsoana mpifidy hatramin’izao.
Raha ny fahitanay azy, tsy ho tanteraka io fifidianana io, raha tsy hoe mihemotra kely. Nefa azo atao hatrany ny manao fifidianana hatrany amin’ny 15 novambra, raha ny lalàm-pifidianana. Na izany aza, efa mieritreritra isika fa hisy ny fihaonana an-tampon’ny Comesa amin’ny volana oktobra ary ny Frankôfônia amin’ny volana novambra. Tsy fantatra hoe eo anelanelan’izay ve no hanatanterahana izay fifidianana izay?
* Mby aiza ny fiatrehana ny fampandrosoana eny anivon’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana amin’izany?
– Raha tena zohina ny raharaham-pirenena, efa miditra amin’ny taona fahatelo amin’ny fe-potoam-piasany izao ny fitondram-panjakana: mbola tsy tafatsangana ihany ireo rafi-panjakana. Misy koa ny andrimpanjakana tsy mbola voatsangana toy ny Fitsarana avo (HCJ). Misy ny mbola tsy feno; ny anjaran’ny Antenimierandoholona any amin’ny Ceni, ohatra. Ny Filankevitra momba ny fampihavanana malagasy (FFM), tapitra ny fe-potoam-piasany. Efa tokony hitsangana ny vaovao…
Hahafahana tena mampanjary izany fitsinjaram-pahefana izany ny rafitra eto amin’ny firenena. Raha tena hampanjariana ny fitsinjaram-pahefana, araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana: efa tokony ho voapetraka avokoa ny rafitra isan’ambaratonga amin’izany. Amin’izao, tsy mbola manomboka ny amin’ny fifidianam-paritra. Tsy fantatra koa ny amin’ny faritany.
* Iza no tokony hifidy ny lehiben’ny faritra amin’ny maha vondrombahoaka itsinjaram-pehefana ny faritra?
– Raha ny tena izy, aleo hofidin’ny vahoaka ny lehiben’ny faritra. Satria masi-mandidy ny vahoaka, tompon’ny teny farany eo amin’ny fampandrosoana ny faritra misy azy. Izay raha fitsinjaram-pahefana marina no atao…
Hatreto aloha, raha ny fijery azy ankapobeny: mpifidy vaventy no hataon’ny fitondram-panjakana hanatanterahana io fifidianam-paritra io. Raha ny fanirianay, aleo hofidin’ny daholobe ny lehiben’ny faritra. Nefa manapaka izay ry zareo fitondram-panjakana, araka ny lalàna ataony.
Raha tena hanao fitsinjaram-pahefana marina, apetraho mazava ny rafitra isan’ambaratonga rehetra.
* Tsy paipaika politikan’ny antoko eo amin’ny fitondrana ve ny nanaovana ny hoe mpifidy vaventy no hifidy lehiben’ny faritra fa tsy ny daholobe?
– Mazava ho azy… Tsy maintsy misy paipaika politika aloha amin’ny fametrahan’ny faritra. Satria ohatra amin’izany ny zava-nitranga tamin’ny fifidianana kaominaly farany teo: natao izay hametrahana sy hahazoana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna maro indrindra, ahafahana mametraka loholona araka izay azo atao. Mbola hametrahana ny rafitra eny anivon’ny faritra koa izay… Misy paipaika politika avokoa ny fiatrehana izany.
Eo koa ny paipaika politika amin’ny hoe mpifidy vaventy no hifidy lehiben’ny faritra. Tanjona amin’izay ny hahazoana ny faritra. Nefa izay marina ve ny tena demokrasia? Tena mamaly ny demokrasia marina ve ny tsy fahazoan’ny tena tsy ara-drariny ny toerana rehetra amin’ny rafitra isan’ambaratongany?